U-Elizabeth "Bessie" Coleman, umshayeli wokuqala wamazwe omnyama wokuqala - AFRIKHEPRI
Eyaziwa ngezindawo zayo ze-aphrodisiac, i-ginger ithuthukisa ukugaya
Isayensi nokuphila: impilo
Indoda nezidumbu zayo - u-Annie Besant (PDF)
Imfihlakalo yaseGibhithe - i-Alexandre Moret (PDF)
Umhlahlandlela we-Chakra (PDF)
Incwadi ephuzi N ° 1 (PDF)
Umhlaba Ongenamdlavuza, Umlando Vitamin B17 (PDF)
Izimbangela Nezixazululo - Hildegarde De Bingen (PDF)
Buka i-Invictus (2009)
Buka Ukulwa Okuhle Kunazo Zonke (2000)
Bukela Umshado Wonyaka (2014)
INdlovukazi uKhalifa, inkosi emnyama eyabusa umbuso waseCalifornia ngaphambi kwekhulu le-15
Umsuka wegama elithi Afrika
Izinkolo kanye ne-parasitism engokomoya
UMarcus Garvey: Ubaba wobunye babantu base-Afrika
Umlando jikelele we-Afrika (umqulu 4)
I-Griotic - Toure Aboubakar Cyprien
Umuntu uveza imicabango yakhe - uJames Allen (Audio)
I-YouTube Iqala Ukubuka Okungaxhunyiwe kwevidiyo e-Afrika
Kuyini ukwazi i-neroscience nentuthuko yomuntu siqu?
I-Trust engenamthetho - Pema Chödrön (Umsindo)
Imfihlo yezimfihlo kakhulu - Earl Nightingale (Audio)
NAMUHLA IBHODI LAKHO IBHODI LENZAKALO YOKUQHUTYWA KANYE NOKUTHOLA ILUNDI LAKHO NGOKUFUNDA NGESIKHATHI
KU-2020, I-INTERNET SPEED INTERNET IYAVUMELWA NGEMINYAKA E-AFRIKA
Umnyombo wokuzithola - Paramahansa Yogananda (Audio)
Kukhona isixazululo esingokomoya kuzo zonke izinkinga zakho - uWayne Dyer (Umsindo)
Uthando Ubudlelwano - U-Eckhart Tolle (Umsindo)
Amandla Okuzethemba - UBrian Tracy
Ukufinyelela okulinganayo - Eckhart Tollé (Umsindo)
Amandla okungazi lutho - uJoseph Murphy (Audio)
U-Elizabeth “Bessie” Coleman, umshayeli wokuqala wamazwe omnyama wokuqala
e AMAFOMANA AFRIKA
U-Elizabeth "Bessie" Coleman
Usuke usabela "U-Elizabeth" Bessie "Coleman, owokuqala ..." Imizuzwana embalwa edlule
U-Elizabeth “Bessie” Coleman waba ngumshayeli wamabhanoyi wokuqala onsundu emhlabeni jikelele. Izikole ezindiza zaseMelika zenqabile ukungena ngezizathu zobulili nobuhlanga. Wabe esesibhalisa esikoleni sezindiza zabafowethu eCaudron. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva, wathola ilayisense lokushayela kwamanye amazwe, okokuqala elinikezwe ngowesifazane wase-Afrika-waseMelika. Ngemuva kokuqeqeshwa eFrance, eJalimane naseHolland, uColeman wabuyela e-United States ngo-1922. Waqala ukwenza iziqu kanye nama-acrobats njengomshayeli wendiza. Abantu bathutheleka ukuze babone i- "Brave Bessie" yenziwe izibalo eziyisishiyagalombili, imigqomo, imibhoshongo yepharashute njll.
UColeman wayehlele ukusebenzisa imali ayitholayo ukuqala isikole sezindiza kubantu baseMelika baseMelika, kodwa umsebenzi wakhe wamiswa kabuhlungu ngo-1926, lapho ukungasebenzi kahle kwemishini kwaholela ekufeni kwakhe. Izinkulungwane zaba khona emngcwabeni wezindiza ezithandekayo. Ubuye waba ugqozi lokwakhiwa kwe- “Bessie Coleman Aero Club”, inhlangano eyakhiwa ngonyaka ka 1929 ukuthuthukisa ukuhamba kwezindiza e-Afrika yaseMelika.